Vaovao - Fitsaboana rano maloto voafidy: Vahaolana azo ekena
Fitsaboana rano maloto voafidy: Vahaolana azo ekena
Ny fitsaboana ny rano maloto itsinjaram-pahefana dia misy fomba isan-karazany amin'ny fanangonana, fitsaboana, ary fanaparitahana / fampiasana indray ny rano maloto ho an'ny toeram-ponenan'ny tsirairay, ny indostria na ny andrim-panjakana, ny sampahon'ny trano na ny orinasa ary ny vondrom-piarahamonina iray manontolo. Ny fanombanana ny fepetra manokana momba ny tranokala dia atao mba hamaritana ny karazana rafi-pitsaboana sahaza ny toerana tsirairay. Ireo rafitra ireo dia ampahany amin'ny fotodrafitrasa maharitra ary azo tantanana ho toy ny fotodrafitrasa mijoro irery na ampidirina amin'ny rafi-pitsaboana maloto foibe. Izy ireo dia manome safidy fitsaboana isan-karazany avy amin'ny fitsaboana tsotra sy tsotra amin'ny fanaparitahana ny tany, izay antsoina matetika hoe septic na rafitra eo an-toerana, mankany amin'ny fomba sarotra sy mekanika toy ny sampam-pitsaboana mandroso izay manangona sy mitsabo ny fako amin'ny trano maro ary mivoaka mankamin'ny rano ambonin'ny rano. na ny tany. Matetika izy ireo dia apetraka amin'ny na akaikin'ny teboka anaovana ny rano maloto. Ny rafitra izay mivoaka amin'ny tany (faritra ambonin'ny rano na tany) dia mila alalana avy amin'ny National Pollutant Discharge Elimination System (NPDES).
Ireo rafitra ireo dia afaka:
• Manompoa mizana isan-karazany, ao anatin'izany ny trano, orinasa, na vondrom-piarahamonina kely;
• Mitondrà rano maloto amin'ny haavon'ny fiarovana ny fahasalamam-bahoaka sy ny kalitaon'ny rano;
• Mankato ny kaody mifehy ny kaomina sy ny fanjakana; SY
• Miasa tsara amin'ny tontolo ambanivohitra, ambanivohitra ary an-drenivohitra.
NAHOANA NO NITSARANA NY FITSIPETANA NY SASETRA?
Ny fitsaboana ny rano maloto itsinjaram-pahefana dia mety ho safidy mahomby ho an'ny vondrom-piarahamonina mihevitra rafitra vaovao na manova, manolo, na manitatra ny rafitra fitsaboana rano maloto. Ho an'ny vondrom-piarahamonina maro, ny fitsaboana itsinjaram-pahefana dia mety:
• Mahomby sy ara-toekarena
• Fanalavirana ny vidin'ny renivohitra lehibe
• Fampihenana ny vidin'ny fandidiana sy ny fikojakojana
• Mampiroborobo ny asa aman-draharaha sy ny asa
• Maitso sy maharitra
• Tombontsoa sy fividianana rano
• Ampiasao amin'ny fomba hendry ny angovo sy ny tany
• Mamaly ny fitomboana ary mitahiry toerana maitso
• Milamina amin'ny fiarovana ny tontolo iainana, ny fahasalamam-bahoaka ary ny kalitaon'ny rano
• Fiarovana ny fahasalaman'ny vondrom-piarahamonina
• Fampihenana ireo loto mahazatra, otrikaina ary loto maloto
• Fanalefahana ny fahalotoana sy ny loza ara-pahasalamana mifandraika amin'ny rano maloto
NY BITTOM LINE
Ny fitsaboana ny rano maloto itsinjaram-pahefana dia mety ho vahaolana mahomby ho an'ny vondrom-piarahamonina misy habe sy demografika. Toy ny rafitra hafa rehetra, ny rafitra itsinjaram-pahefana dia tsy maintsy noforonina araka ny tokony ho izy, tazonina ary ampiasaina mba hanomezana tombony tena tsara indrindra. Raha toa ka tapa-kevitra ny ho mendrika izy ireo, ny rafitra itsinjaram-pahefana dia manampy ny vondron'olona hahatratra ny faran'ny telo maharitra: tsara ho an'ny tontolo iainana, tsara ho an'ny toekarena ary ho an'ny vahoaka.
AIZA NO ASA
Loudoun Water, any Loudoun County, Virginia (Washington, DC, ambanivohitra), dia nandray fomba fampiraisana amin'ny fitantanana rano maloto izay misy ny fahaiza-mividy avy amin'ny zavamaniry afovoany, toerana famerenana rano amin'ny zanabolana ary rafitra kluster kely iraisan'ny vondrom-piarahamonina. Ny fomba fiasa dia namela ny distrika hitazona ny toetrany ambanivohitra ary namorona rafitra iray izay ahazoan'ny fitomboana fitomboana. Ny mpamorona dia mamolavola sy manamboatra fotodrafitrasa rano manara-penitra ho an'ny fenitry ny rano Loudoun amin'ny vidiny manokana ary mamindra ny fananana ny rafitra mankany amin'ny Loudoun Water mba hikolokoloana hatrany. Ny programa dia mizaka tena ara-bola amin'ny alàlan'ny sanda izay miantoka ny fandaniana. Raha mila fanazavana fanampiny:http://www.loudounwater.org/
Ny Distrikan'ny Utility Consolidated (CUD) ao amin'ny County Rutherford, Tennessee, dia manome serivisy fantsom-pako ho an'ny mpanjifany maro any ivelany amin'ny alàlan'ny rafitra vaovao. Ny rafitra ampiasaina matetika dia antsoina hoe rafitra septic tank effluent pumping (STEP) izay misy rafitra rano maloto miisa 50, izay misy rafitra STEP, sivana fasika miverimberina ary rafitra fanaparitahana rano mitete lehibe. Ny rafitra rehetra dia tompony sy tantanan'ny Rutherford County CUD. Ny rafitra dia mamela ny fampandrosoana avo lenta (fizarazaran-tany) any amin'ny faritry ny distrika izay tsy misy ny fantsom-panafody any an-tanàna na ny karazana tany dia tsy mahatonga ny fantsom-panafody mahazatra sy ny lalan-drano. Ny tank septic 1.500-galona dia misy paompy sy tontonana fanaraha-maso izay hita isaky ny toeram-ponenana mba hamoahana rano maloto amin'ny rafitra fanangonana rano maloto. Raha mila fanazavana fanampiny: http://www.cudrc.com/Departments/Waste-Water.aspx